Taliyaha booliska Gaalkacyo oo ka warbiyay sida uu uga badbaaday Qarax loogu xiray Gaarigiisa – Hornafrik Media Network
Taliyaha booliska Gaalkacyo oo ka warbiyay sida uu uga badbaaday Qarax loogu xiray Gaarigiisa
Taliyaha saldhiga bartamaha waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee Puntland Cabdiqani Jaamac Axmed Xabuun oo warbaahinta kula hadlay magaaladaas ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qarax loogu xiray gaarigiisa oo uu ka badbaaday.
Taliyaha ayaa sheegay in saakay isagoo u socda shaqadiisa uu arkay gaarigiisa u yaallay gurigiisa oo qarax loogu rakibay, kadibna uu ku dadaalay sidii uu xaaskiisa iyo carruurtiisa uga badbaadin lahaa qaraxa.
Waxyar kadib markii uu dhamaan gurigii ka saaray dadka ayuu sheegay in uu qarxay gaarigii, isla markaana uu san geysan qaraxaas wax khasaare nafeed ah, balse uu burburay gaarigiisii iyo qeybo kamid ah gurigiisa.
Taliye Xabuun ayaa sheegay in xalay intii la hurday loo soo dhacay gurigiisa kadibna qarax nooca taleefonka lagu hago ah loogu xiray gaarigiisa oo deyrka yaallay si loo qarxiyo marka uu subaxii ku shaqa tago, hayeeshee uu alle ka badbaadiyay.
Dhaq-dhaqaaqyo ciidan oo saakay ka socda duleedka Xudur